> Resource > Windows > Windows 7 SSD ayna: Sida loo Tayadoodii Windows 7 SSD
Haddii aad socda Windows 7 ay SSD sida drive boot ah, waa in aad ogtahay Windows, kuwaas oo 7 faaidaysan ayna si aad u hesho computer deggan.
Isu suuris Disable
Disable defrag on SSD ah
Nidaamka Disable soo celiyo
Daaqadaha Disable monitor isku halaynta
Ha gab Indexing
Windows 7 sameeyaa qaar ka mid ah si toos ah, sida superfetch Disable, prefetch, bootfetch, iyo defrag Disable on SSD ah. Waa hagaag, iyadoo aan loo eegayn nooca nidaamka ama disk adag waxa aad isticmaasho, waxaa jiri doona shaqo kajoojinta ururtay kombiyuutarka, iyo waxa aad u baahan tahay si ay u nadiifiyaan dura, si loo xaqiijiyo in qaab PC weyn.
Marka aad hesho waxa ay maamushaa gaabis ah iyo barnaamijyo ay bilaabaan inay si tartiib tartiib ah ama xataa aadan ka jawaabin ka jawaabo, ayaa la rejeynayaa in aad si ay u qabtaan a SSD Windows 7 ayna. Waxaad kala cadeeyo karo files junk, khaladaad diiwaanka, info gaarka ah, ka eryis diiwaanka, iwm mid mid, oo waxa kale oo aad dooran kartaa si aad u hesho iyaga oo dhan la waayay hal mar la qalab nidaamka nadiifinta Wondershare 1-Click PC Care , taas oo hagaajin karo hawlaha kor ku xusan oo dhan mid ka mid markii la mid click, waqti badan si aad u wada sameeyaan mid ka mid ah oo talaabo talaabo lagu badbaadinayo.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si loo soo dajiyo iyo ordi qalab daryeelka PC this. Waxaa si toos ah u xaaqi karaan your computer in laga takhaluso files aan waxtar lahayn iyo khaladaad waxyeello, iyo dhalin warbixin iskaanka si aad u hubiso xaaladda of your computer.
Markaas qabtaan click ku "hagaajin NOW" button. OK. Waxaad filaayo in aad Windows 7 SSD, oo waxaad ka heli doontaa waxa ay maamushaa in ka badan si habsami leh.
Waa maxay dheeraad ah, taas 1-Click PC Care bixisaa ilaalinta ammaanka computer si aad u hubiso in aad u sameeyaan hoos deegaan gebi ahaanba ammaan.